Luuqadda Iswidishka Finland dhexdeeda - InfoFinland
Nolosha Finland > Luqada Finnishka iyo Iswidishka > Luuqadda Iswidishka Finland dhexdeeda
Finland waxaa ka jira laba luuqadood oo rasmi ah, Finnish iyo Iswidish. Dalka Finland dhexdiisa waxaa luuqadda Finnishka afkooda hooyo ahaan ugu hadla qiyaastii 90% ka mid ah dadka Finnishka. Iswidishka waxaa afkooda hooyo ahaan ugu hadla qiyaastii 5% ka mid ah dadka Finnishka. Luuqadda Iswidishka waxaa inta badan looga hadlaa xeebaha galbeed iyo kuwa koofureed ee Finland.
Luuqadda Iswidishka ee Finland looga hadlo waa Iswidishka Finnishka (suomenruotsia). Taas waxaa loogu dhawaaqaa si ka yara duwan Iswidishka looga hadlo dalka Iswidhen.
Haddii aad dooneyso in aad codsato jinsiyadda Finland, waxaad u baahan tahay shahaadada aqoon kugu filan ee afka Finnishka ama Iswidhiska. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Shahaadada rasmiga ah ee aqoonta luqada.
Luqada Iswiidhishka waxaad isticmaali kartaa marka aad la macaamilayso saraakiisha Kelada ama Xafiiska shaaqada. Waxaad sidoo kale dib dambe ka beddeli kartaa luqadaada da-qabsashada.
Degmooyinka Finland waxay ahaan karaan kuwo hal luuqad ama labo luuqadood oo ay dadka ugu adeegaan leh. Degmooyinka Finland intooda badan luuqadoodu waa Finnish. Degmooyinka labada luuqadood leh waxay ku yaallaan xeebaha galbeed iyo kuwa koofureed. Haddii degmadaadu ay labo luuqadood leedahay, markaas waxaad sidoo kale adeegyada degmada u isticmaali kartaa luuqadda Iswidishka, tusaale ahaan xarunta caafimaadka.
Dal kula qabsashada luuqadda Iswidishaka
Waxaa laga yaabaa inay adiga kuu tahay fursad wanaagsan dal kula qabshashda luuqadda Iswidishku tusaale ahaan haddii:
Aad degantahay aag, ay degan yihiin dad badan oo luuqadda Iswidishka ku hadla.
Ay jiraan xubno qoyskaaga ka mid ah oo Iswidish ku hadla ama qaraabo kale.
Aad xoogaa ka taqaano luuqadda Iswidishka.
Waxaa laga yaabaa in luuqadda Iswidishku ay faa'iido kuu leedahay markii aad raadineyso shaqo. Si kastaba ha ahaatee la soco, in goobaha shaqada intooda badan looga baahan yahay aqoonta luuqadda Finnishka. Haddii xitaa aad luuqadda dal laqabsiga u dooratid luuqadda Iswidishka, waxaa kula gudboon inaad mar uun sidoo kale aad baradid luuqadda Finnishka.
Degmooyinka qaarkood waxaad ka qayb geli kartaa waxbarashada dal la qabsiga oo luuqadda Iswidishka ku baxaysa. Haddii aad heliweyso waxbarashda dal laqabsiga oo luuqadda Iswidishka ah, markaas xaaladaha qaarkood waxaa suurtogal ah in lagaa kaalmeeyo barashada luuqadda Iswidishka ee aad adigu iskaa u raadsatay, haddii arintaan horay loogu heshiiyey markii la sameynayey qorshahaaga dal laqabsiga iyo shaqada. Weydii dal la qabsiga luuqadda Iswidishka, marka adiga laguu sameynayo kaarteynta hore iyo qorshaha dal la qabsiga. Sharcigu siduu qabo waxaad xaq u leedahay inaad luuqad dal la qabsi u dooradit Finnish ama Iswidish.
Wixii dheeraaad ah oo ku saabsan adeegyada dal laqabsiga ka akhriso bogga InfoFinland: La-qabsashada Finland.
Dal laqabsiga luuqadda Iswidishka oo kaarto lagu muujiyey.Finnish | Iswidish | Ingiriis
Barashada luqadaha oo ah waxbarashada xoogga shaqada
Waxaad afka Iswidhiska ka baran kartaa waxbarashada xoogga shaqada, haddii aad tahay macaamilka xafiiska shaqada iyo quudka. Weydii macluumaad dheeraad ah Xafiiskaada shaqada iyo quudka.
Xannaano maalmeedka caruurta iyo waxbarashada
Dalka Finland waxbarashada xanaano maalmeedka, waxbarashada iskuulka ka horeysa iyo waxbarashada aasaasiga ah intuba sida badan waxay ku baxaan luuqadaha Finnishka ama Iswidishka. Haddii aad dooneysid in ilmahaadu uu aado xanaano maalmeed Iswidish ah, waxbarashda iskuulka ka horeysa ama iskuul Iswidish ah, degmadaada waydii suurtogalnimada arintan.
Degmooyinka qaarkood waxay ardayda waxbarashada aasisiga ah dhigata oo aqoonta luuqadoodu aysan ku filanayn waxbarashada caadiga ah u abaabulaan waxbarashada u diyaarinta waxbarashda aasaasiga ah. Weydii degmadaada inay abaabusho waxbarashada iskuul u diyaarinta oo Iswidisha ah.
Haddii ilmaha luuqadiisa afka hooyo ay tahay mid aan ahayn Finnish ama Iswidish, markaas degmada ayaa u abaabuli karta ilmaha barashada luuqadiisa hooyo. Haddii ilmuhu uu aado iskuul luuqadda Iswidishka wax looga barto, wuxuu Iswidishka u baran karaa luuqad labaaad ahaan.
Wixii dheeraad ah oo la xiriira xanaano maalmeedka carruurta, waxbarashada iskuulka ka horeysa iyo waxbarashada aasaasiga ah ka akhriso bogga InfoFinland: Nidaamka waxbarashada ee Finnishka.
Dugsiga sare iyo macaahidda xirfadaha shaqada
Dugsiga hoose dhexe kadib waxaad wax ka baran kartaa dugsiga sare ama machadka xirfadda. Macaahidda xiradaha iyo dusiyada sare ee luuqadda Iswidishka ah wax looga barto waxay ku yaalaan degmooyinka labada luuqadood looga hadlo iyo weliba degmooyinka luuqadda Finnishka oo kaliya looga hadlo kuwo ka mid ah.
Qaar ka mid macaahidda xirfadaha iyo dugsiyada sare waxay qaban-qaabiyaan waxbarashada iskuul isku diyaarinta. Waxbarashada iskuul isku diyaarinta ah waxaad ka heleysaa macluumaadka iyo aqoonta aad uga baahantahay oo kaa caawinaya sii wadashada waxarashada.Waxaad kaloo sare u qaadi kartaa heerka aqoontaada luuqadda.
Waxaad adeegga Opintopolku.fi ka raadin kartaa macaahidda xirfadaha iyo dugsiyada sare ee luuqadda iswidishka ah iyo sidoo kale waxbarashooyinkooda la xiriira iskuul isku diyaarinta.
Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinland: Nidaamka waxbarashada ee Finnishka.
Macluumaadka waxbarashada dugsiyada sareFinnish | Iswidish | Ingiriis
Finland waxaa ku yaalla macaahid sare oo xirfadaha iyo jaamacado luuqadda Iswidishka ah wax looga barto. Intaas waxaa dheer oo jira dhawr jaamacadood oo labada luuqadood isticmaalo, kuwaas oo luuqadda Iswidishka wax looga baran karo.
Waxaad adeegga Opintopolku.fi ka raadin kartaa jaamacadaha ama macaahidda waxabarashada sare ee luuqadda Iswidishka wax looga barto.
Xagee ayaan ka baran karaa luuqadda Iswidishka?
Luuqadda Iswidishka waxaad ka baran kartaa tusaale ahaan macaahidda bulshada, macaahidda ururada shaqaalaha iyo jaamacadaha xagaaga. Macluumaad la xiriira barashada luuqadda Iswidishka weydii xaafiiska waxbarashada ee degmadaada, hagaha waxbarshada ee macaahidda ama barta adeegga la talinta dadka wadanka u soo guurey.
Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinland: Waxbarashada hiwaayadda ah.
Luuqadda Iswidishka ee internerka
Luuqadda Iswidishka waxaad ka baran kartaa barnaamjyada internetka, kaas oo aad ku soo dagsan kartid teleefankaaga ama tabletkaaga. Dukaankaaga barnaamjyada ka raadi barnaamij (app) luuqadda Iswidishka ah (tusaale Google Play ja App Store) adigoo isticmaalaya xaraf raadinta ah ”learn Swedish”, ”Swedish language”, ”lär dig svenska” ama ”svenska”. Barnaamjyada qaarkood waa lacag.
Baaraatiko iyo koorsooyin xagga internetka ah
Internetka waxaad ka heleysaa koorsooyin heerarkoodu ay kala duwan yihiin oo Iswidish ah. Internetka waxaa suurtogal kuu ah tusaale ahaan inaad ka sameysid baaraatiik (tababar) iyo inaad geymam xagga barashada luuqadda ah ku ciyaartid, kana baratid naxwaha iyo erayoyinka, sidoo kalena aad ka akhrisato qoraalada.
Dugsiga luqadda ee luqada Iswiidhishka, waxyaabo warbaahinta ku jirta oo luqado badan loo turjumayFinnish
Luuqadda Iswidishka ee internerkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Iswiidhishka Finland ee Internetka ku jiraIngiriis
Baaraatiko iyo koorsooyin xagga internetka ahFinnish
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 09.07.2021 Boggan war-celin ka soo dir